Dhexdeenna oo ah 4.14 DHAMMAAN noocii ugu dambeeyay ee aan quful lahayn. [La cusbooneysiiyay]
Arbaco, 19ta Meey 2021
Inicio/ciyaaraha/Dhexdeena/Dhexdeenna 4.14 DHAMMAAN AAN LA FURIN [nooca ugu dambeeyay]
Dhexdeenna 4.14 DHAMMAAN AAN LA FURIN [nooca ugu dambeeyay]
Kani waa noocii ugu dambeeyay ee ciyaarta ugu caansan sanadka 2020, Dhexdeenna, maxaad sugeysaa inaad soo dejiso?
2 642.589 5 daqiiqo akhri
Halkan waxaad ku leedahay nooca 4.14 ee naga mid ah. Waa in la ogaadaa in ay tahay inaad dhameystirto isla talaabooyinkaas si aad ugu raaxeysato Dhexdeenna 12.9s ee dhaqan geli jiray, kuwaasoo ka hooseeya maqaalka. Cusboonaysiintaan cusub ee naga mid ah 4.14 WAX KASTA OO AAN LA XIRIIRIN qeybtii ugu dambeysay. [La cusbooneysiiyay] Waxaa jira hagaajinta cayayaanka iyo hagaajinta ciyaarta.
Noocaan cusub ee ugu dambeeyay ee naga mid ah 4.14 wuxuu leeyahay isbeddelo aad runtii ku ogaan karto daqiiqadda ugu horreysa. Waxa ugu horreeya ee aan iftiimin karno ayaa ah in hadda markii la galayo ciyaarta ay kaa codsan doonto inaad foom ku buuxiso da'daada. Waxaad arki kartaa shaxanka ciyaarta oo leh xoogaa horumar ah, laakiin ugu dambeyn horumar.
Sugitaanku wuu dhammaaday, noocii ugu dambeeyay ee Dhexdeenna ah ayaa hadda la heli karaa waxaanan kuu daynaynaa suurtagalnimada inaad bilaabi karto isla markiiba tijaabinta. Kani waa nooca 4.14 kaas oo aan ka heli karno xoogaa isbeddello xiiso leh. Laakiin shaki la'aan, waxa ugu muhiimsan iyaga ayaa ah ka mid noqoshada iyo bilaabida khariidada cusub ee Us Us Us.
Maxaa ku cusub nooca ugu dambeeyay ee naga Mid ah 4.14
Kani waa Airship, khariidad aan bilo sugeynay. Haa, bilo mana buunbuuninayno, sugitaanku wuu dheeraa, laakiin waxaan hubnaa inay u qalanto. Cusboonaysiintaan cusub ee naga mid ah waxaan ka heli karnaa wararka soo socda.
Nidaam warbixin oo cusub oo loogu talagalay khiyaanooyinka ciyaartoyda.
Xakamaynta waalidka cusub.
Is dhexgalka ciyaarta koofiyadaha cusub.
Sidoo kale horumar la taaban karo oo ku saabsan bilicsanaanta ciyaarta, tan waxaan ku ogaan karnaa sida aan ugu ciyaareyno khariidada cusub. Isku mid in ay aad uga weyn tahay kuwii hore, waana sababta aan u hubno inaad awoodi doontid inaad saacado badan oo xiiso leh ku qaadato la ciyaarida asxaabtaada.
Hadda marka la eego makaanikada ciyaarta waxaan sidoo kale dhihi karnaa inuu jiro isbeddel weyn, waa shaqada jawaabaha degdegga ah ee cusub. Hadda markaad gasho aagga lagu sheekaysiga, ha ahaato qolka ciyaarta ama ciyaaraha, waxaad awoodi doontaa inaad aragto ficilkan cusub.
Si aad u adeegsato waa inaad gashaa astaanta cusub ee aad arki karto oo aad xulo qaybta jawaabaha aad rabto inaad ku dhex isticmaasho dhexdeenna la cusbooneysiiyay.
Ku soo biir mujtamaceena 'DISCORD' hada si aad ugu raaxeysato in ka badan 6 kun oo CIYAARAHA kulankaan xiisaha badan Dhexdeenna ...
Waxa aan qof kastaa ogayn waa sida loo sameeyo Inaga Dhexdiisa 4.14, iyo tan ugu fiican, OO AAD QAADO WALBA. Sababtaas awgeed, halkan waxaan ku sharxi doonnaa wax kasta oo ay tahay inaad sameyso si aad ugu raaxaysatid qaybtan xiisaha leh. Baro Sida loo noqdo Tijaabiyaha Beta ee Midkeen markaa waxaad ka mid noqon kartaa kuwa ugu horreeya ee iskudaya astaamaha cusub ee ciyaartan.
Noocaan cusub ee loo yaqaan Dhexdeena 4.14 waxaa kaliya loogu talagalay Pc daqiiqad, laakiin waxaan bixinaa hab lagu ciyaaro sidoo kale Android. Xusuusnow in qoraalkii hore aan ku baranayno sida loogu ciyaaro Dhexdeenna kombiyuutarka bilaash ah.
HOTEEEE: INOO DHEX JIRA WALDOON WADAAS
Waxay si xoog leh u soo jiidanaysaa dareenka kuwa raacsan, waana wax qof kastaa doonayo inuu ku rakibo qalabkooda. Tan waxaa ugu wacan astaamaha ay soo bandhigto, oo aan ku xusnay maqaalkan hadda. Haddii aad rabto is dhexgal weyn Dhexdeenna waad arki kartaa qaabka casaanka ah ee Innaga Ka Mid ah, aad ayey u egtahay…
Waan ognahay inay jiraan dhowr khiyaameeya Innaga Mid ah oo leh hawlo kala duwan. Waxay u dhexeeyaan iyagoo haysta dhammaan qalabka, illaa sida loo noqdo khaa'in marwalba Dhexdeenna. Laakiin waxay muhiim noogu muuqataa inaan ku tusno wax iska ilaalin doona dhibaatooyinka kulankaan, waana:
Sida looga fogaado in BANKADA lagaa dhigo Dhexdeenna si loo isticmaalo Hacks?
Haatan aan u gudubno waxa runtii na xiiseynaya, taas oo ah rakibidda noocaan 4.14 ee ah Midkeen.
Talaabooyinka la raacayo
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa ka tirtir nooca aad horay u rakibtay taleefankaaga gacanta si aanad wax dhibaato ah ugu qabin inaad ka dhex shaqayso Kombuyuutarkaaga dhexdeenna 4.14. Haddii aadan sameyn, waxaa jiri kara isku dhac arjiga mana awoodi doontid inaad ciyaarto.
WAXBARASHADA YOUTUBE EE PC
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso: Dhexdeenna oo leh GIANTS Mod
Noo ah nooca 4.14 ee loogu talagalay Pc iyo Android, bilaash leh youtube TUTORIAL.
Uma maleynin inaan ka baxeyno adiga oo aan ku barin sida aad uga heli laheyd Dhexdeenna 4.14 kumbuyuutarkaaga ama kumbuyuutarkaaga. Halkan waxaad ka arki kartaa cashir fiidiyow ah oo ku saabsan sida loo ciyaaro Dhexdeenna, nuqulkii ugu dambeeyay, Dhib malahan.
Waayahay, tani waa mid aad u fudud. Tan awgeed waa inaan raacnaa mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinka aan kugu tusno casharradan soo socda.
Nooca Xulashada PC 1 Xulashada PC 2 Android
4.14 Toos u dejiso Toos u dejiso download
4.1 Toos u dejiso Toos u dejiso download
3.31.3 Toos u dejiso
3.31s Toos u dejiso Toos u dejiso download
Dhexdeenna 3.31.3 PC:
Casharro lagu soo dejinayo Dhexdeenna 4.14 cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Pc iyo Android wax walbana waa la furay
Dhexdayada 4.1 macruufka (nooca caadiga ah)
Waxaan sidoo kale kuu daynaynaa soo degso linkiga toos ah
Hagaag, talaabooyinkan hada waxaad ku ciyaari kartaa ciyaarta aad ugu jeceshahay Dhexdeenna 4.14 WAX KASTA OO AAN LAGU XIRIIRIN labadaba kombuyuutarkaaga ama mobilkaaga
Isku day cusubo MEGAMAN loogu talagalay Dhexdeenna
Ku billow ciyaarta dhexdeenna 4.14
Maadaama aad awood u laheyd inaad rakibto Dhexdeenna 4.14 DHAMMAAN FURAN, hadda waxa soo socda ayaa ah in la furo ciyaarta ugu horreysa, halkee waxaad hadda gelin kartaa magacaaga Nick (Magaca). Inta soo hartay waxaad horeyba ugu ogtahay wadnaha, maadaama aad horey uqarsatay farsamooyinka ciyaarta.
Isku day inaad markasta taxaddar yeelato, gaar ahaan dadka loo malaynayo inay ciyaarta ku jiraan. Weligaa jidkaaga ha uga bixin maxaa yeelay ma ogid haddii ciyaartooyadaasi dhab ahaantii yihiin kuwa dhabta ah. Ha iloobin inay noqon karto dabin khiyaaneeye ah waana sababta ay ugu muuqato ciyaar buuxda, laakiin dhab ahaan run maahan sidaa darteed waligeed kuguma badna inaad ka taxaddarto.
Halkan waxaad ku tijaabineysaa xirfadahaaga, noocani waa mid aad u dhakhso badan sidaa darteed waa inaad siisaa farahaaga xawaare, in kasta oo dabcan aad wax ka beddeli karto faahfaahintaas adigoo abuuraya qol kuu gaar ah.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa: DRAGON BALL Z loogu talagalay Inaga
Qaybtan ka mid ah Innaga naga mid ah 4.14 dhammaan qalabka ciyaarta horay ayaa loo sii daayay
Xayawaanka iyo dhammaan koofiyadaha, xitaa koofiyadaha Halloween iyo sidoo kale koofiyadaha kirismaska.
Waxaan sidoo kale kuu daynaynaa nooca 12.9s
Ciyaartani waxay leedahay dhammaan astaamaha noocyadii hore, taasi waa:
Ku soo dejiso nooca 12.9s by Mega
Qaybta 12.9s ee Pc by Warfaafinta
Waxa intaa u dheer ah nooca 10.2s ee naga mid ah markaa wax cusub kuguma noqon doonto inaad u ciyaarto sida ugu fiican.
Hubso inaad hubiso: Qaababka Ugu Fiican Ee Naga Dhexeeya
Sidaad u aragtay, wax cusub kuguma aha waxa ku xidhan kulankaan xitaa adoo adeegsanaya noocaan cusub ee 3.9. Sidaa darteed, waxaan tixgelinayaa inaadan lahaan doonin wax dhibaato ah markaad ciyaareyso.
dhexdeenna 11.17 dhexdeenna 11.17 tallaabo dhexdeenna 11.17s dhexdeenna 11.4a dhexdeenna 11.7a Dhexdeena 12.9 Ka mid ah US 12.9s dhexdeenna 17 dhexdeenna 3.5 nooca ugu dambeeyay dhexdeenna 3.5 version dhexdeenna 3.9 dhexdeenna 3.9 dhammaantood waa la furay dhexdeenna 4.1 dhexdeenna cusboonaysiin 3.9 dhexdeenna cusbooneysiin cusub dhexdeenna diyaarad dhexdeenna diyaaradaha 4.1 dhexdeenna dhar bilaash ah dhexdeenna hargahoodu waa bilaash dhexdeenna oo dhan wuu qufulay dhexdeenna cusboonaysiintii ugu dambaysay dhexdeenna cusboonaysiintii ugu dambaysay 4.1 dhexdeenna cusboonaysiintii ugu dambaysay oo dhan la furay dhexdeenna ah kii ugu dambeeyay dhexdeenna nuqulkii ugu dambeeyay 3.5 Dhexdeenna version ugu dambeeyay oo dhan quful dhexdeenna 11.17 dhexdeenna 3.5 dhexdeenna 4.1 kala soo degso 3.9 dhexdayada ka ciyaar 11.17 casriyeyntii ugu dambeysay ka mid ah casriyeyntii ugu dambeysay dhexdeena cusbooneysiintii ugu dambeysay dhexdeena oo ah nooca ugu dambeeyay dhexdeenna Nooca ugu dambeeyay ee naga mid ah 17 Nooca ugu dambeeyay ee naga mid ah Noocii ugu dambeeyay ee naga mid ah 12.9s
Sharciga Ohm iyo sirtiisa [BAYAANKA]
Sida loo abuuro bogga AUTOMATIC [Laga bilaabo xoq]
yar giron isagu wuxuu leeyahay:
Nofeembar 25, 2020 markay tahay 11:30 pm
Mahadsanid waxaan raadinayay cusbooneysiinta cusub ee maanta naga mid ah maxaa yeelay ciyaarta ayaa ii sheegtay in cusbooneysiinta cusub ay soo baxday mana aanan helin…. Nasiib wanaag boggan waa mid casriyeysan oo leh noocyo badan, hack iyo inbadan oo badan ayaa kusii socota sidan MAHADSANID …………………… .: BY Crack-Gamer: ……………………
Emili isagu wuxuu leeyahay:
Janaayo 29, 2021 markay tahay 3:22 pm